Kuberekwazve Kwekutsvakurudza Kuberekwazve Kwemhosva Nyaya yaErnst Mach | Kip Thorne: Groundbreaking Fizikisi mune 2 Hupenyu uye an Interstellar Theorist muContemporary Times - Kuberekwazve Kwekutsvagisa
Yakarongwa na: Walter Semkiw, MD
Yakasimbiswa na: Mweya Kuva Ahtun Re mune Ryerson-Semkiw Kuberekwazve Kwekutsvakurudza Session
Chinyorwa na: Walter Semkiw, MD
Dzvanya pamufananidzo kuti uwedzere kuwedzera
US Navy UFO Vhidhiyo yakaratidzwa paTV Series "Isingazivikanwe"
Mushure mekunge US Navy yaona vhidhiyo yeUFO yakatorwa nevatyairi vendege, ndakatanga kufarira nezvenyaya iyi. Chinyorwa changu chekutanga pane ET uye UFOs chinogona kuongororwa pane inotevera peji:
ETs 'Maonero pavanhu
Nharaunda Dema, Ernst Mack uye Kip Thorne: Basa Rinoenderera Mberi kuburikidza nekuzvarwa patsva
Ini handisi physicist, ini ndiri chiremba, saka handina ruzivo rwekudzidza kuti ndinzwisise chimiro chefizikiki chekufamba pakati penyeredzi.
Zvakadaro, ndakazviedza. Vamwe vakafungidzira kuti kufamba kwenzvimbo dzinogona kuitiswa neimwe nzira maburi matema.
Imwe fizikisi uyo ane mukurumbira mumunda wemaburi matema ndiye Kip Thorne.
Ndanga ndichishanda pakutsvagurwazve patsva kubva muna 1995. Uku kutsvagurudza kunoratidza kuti isu tine matarenda akafanana uye kugona kubva kune imwe hupenyu kuenda kune imwe, uye izvo kumeso maficha zvinogona kuenderana. Aya mazano ekuzvarwa patsva anoratidzwawo mubasa re Ian Stevenson, MD weYunivhesiti yeVirginia.
Kip Thorne seKuberekwazve kweFizikiki Ernst Mach
Ndakafungidzira kuti Kip Thorne anofanira kunge aive nyanzvi yefizikiki munguva yeupenyu hwapfuura. Pandaikungurutsa pfungwa iyi mupfungwa dzangu, ndakafunga nezvazvo Ernst Mach, wandakazoona aive neuso hwakafanana neKip.
Mukugadzirisa ne Kevin Ryerson, mweya uchinzi Ahtun Re, uyo aratidzira kugona kuita kweakapfuura hupenyu machisi nehupamhi hwechokwadi, akasimbisa kuti Kip Thorne ndiko kuberekwazve kwaErnst Mach.
Ernst Mach uye Ndege Mach Speed
Mach akaberekwa muna 1838 muAustria. Akanga ari nyanzvi yefizikiki yaifananidzira pfungwa yaEinstein yehukama.
Iye anonyanya kuzivikanwa nekugadzira chiyero chekubhururuka kwendege, umo kumhanya kwendege kunopatsanurwa nekumhanya kweruzha. Kana ndege ichibhururuka zvakapetwa kumhanya kweruzha, inoongororwa kubhururuka paMach 2 velocity.
Mach akafa muna 1916.
Hupenyu Hwekare Tarenda: Kip Thorne anoenderera nebasa raEst Mach
Kip Thorne akaberekwa muna 1940 muUnited States. Iye inyanzvi yezve astrophysical zvinorehwa nedzidziso dzaEinstein, kusanganisira manzwisisiro atinoita maburi matema, mafungu emagetsi uye kufamba kwenzvimbo. Thorne aive chipangamazano kumufirimu yomuchadenga.
Kuti utarise nyaya dzakafanana, ndapota enda ku:
Sayenzi Nekombiyuta Kuberekwazve Kwemakore
Chirongwa cheMweya muKuberekwa kweMweya: Chiso maficha aErnst Mach naKip Thorne akafanana.
Pasika Hupenyu Passions, Tarenda uye kugona: Kip Thorne ari kuenderera mberi nebasa raErnst Mach.
Kuchinja kweNyika: Mach akaberekerwa muAustria, uku Thorne akaberekerwa muUnited States.
Kunzwisisa kuti isu tinogona kushandura chinamato uye nyika kubva kune imwe hupenyu kuenda kune imwe kunogona kubatsira kugadzira runyararo nyika, sezvo kwakawanda kukakavara nehondo zvichibva pamusiyano mune izvi zvetsika mucherechedzo wekuzivikanwa.
Mhosva yakakosha mune izvi ndeye:
Anne Frank | Barbro Karlen Kuberekwazve Kwemhosva: A Christian Musikana anowana Hwake Hwekare Hupenyu Hupenyu Kumba